Rer Mudug in the Movie - Page 2 - General - Somali Forum - Somalia Online
Rer Mudug in the Movie
By Abtigiis, June 2, 2008 in General
^Hayeh, Yarka Sanadka, sheekada 'far bukto iyo meesheedaa is og' miyaa adi...Yaa loo jeedaa afkeen? Ar Reer-Mudug wax iigalay iyo waxaan iigalin walaguu yaqaan, ee isoo xanso...
PS, maanta xoogaa waa fahmay waxaa qortay, jilcis uma baahni...
Cakku Ina Libaax-san-ka-taabte. Hadduu maanta Alle-u-baahne joogi lahaa miyyaa reer Mudug A & T wax ka sheegi lahaa...
And speaking about Jacaylbaro gabaygiisa, waxaad isoo xasuusisay nin reer Gaalkacyood ahaa oo sidaa doo kale xiniinya badnaa , laakiin aan sida loo gabyo aqoon.
Waxaa la yiri ninkaa baa nin gabyaa ahi u gabyey. Wuxuu ballan ku qaaday inuu ninkaa iska dhiciyo [that's classical reer Mudug mantra, yaan lagaa badin. Laakiin in laga badinayyo isbaa waa ogaa ee xiniinyihii baa ka battay sida Jacaylbaro. Habbeenkii danbe buu maqdarad [gathering] dhigay. Reer Galkacyood kii oo dhan buu casumay oo yiri ilma adeerayaalow caawaa inaan Faarax ugabyaan rabaa ee ha la i dhegeysto.
Waa lasyku yimid.
Ninkii asaga ahaa inta istagay oo Faarax usoo dhawaaday buu yiri:
Najjisyahow, najjisku dhalay waa kuu gabyahayaaye,
Doofaar baad tahay, oo sidaad iigu soo baxday baan kuugu soo baxay'e
Nacallaa waaridkaa iyo walcankaagaba .....
Oday Xiin, kolkaad Shariifkii iga reebtay, eed faraskii aan iska saaraa iga dajisay, miyaa hadana wali ila daba socotaa wadhaf?
lool@najisyahoow najisku dhalay inaan....
Koolkat: Baleeg waad i caayaysaaye; wiilka sanadka ma waxaad u jeedaa "wiilkii wareerka ee Sanadka"??
^^Mayyee markaan adaan kuu baqay adeer! Reer Gaalkacyoodku 20 kii sano ee lasoo dhaafay waxbay diliyeen, and I don not want an intellectual like you inuu waxaan macno lahayn ku dhinto...
Madax ku dhiigle, xaad la yaabtay?
A&T, cuqdad aa kaabuuxdaa umaleynaa...Wax kasto is not caay ama wax laguu hoosgalinaayo, wah...
As Tuujiye would say 'Wareer Badanaa'!!!
^ Hadana waad isii caayaysaa? I really enjoy when you get upset.
^LOOOOOOOOOL, you are just too cute for your own sake...Upset kuyeh...Ani iyo upset isma daaqilno, sowtaan kuu sheegay...Ee dhibaatada wexey ka taagantahay, kaftankeygaad sikale u qaadataa, markaasaa adiga is calool xumeysaa...Ha iga calool xumaan, meeshaan nacnac uun baan ku hayaayee...
PS, toloow mexey eheed wexey Soomaali ku maahmaahi jirtay? Hmmmm, something about 'qofkii kujecel aa ku caayo'... Iga leexo hade, caku shiirbadan...
Waxaad i xasuusisay ninkii reer hawd ee iyada oo beeshu guurayo intuu qayliyay yidhi hayaaay ,, waar awrta joojiyaaay gabay baa i haya e ,, awrtii baa la joojiyay oo ninkii la isugu soo ururay ilayn waakan yidhi gabay baa i haya e ,,,, markiisii horena inuu gabyo baa loogu taag waayay oo waa laga quustay,,, waxa la yidhi ninkii waakan hagaagay ee bal dhegeysta ,, markii la isu yimid buu gabaygii bilaabay oo yidhi:
hobaalayeey hoobaalayeey hooye
gabay baa i haya oo waa gabayo ciilkoode
Uubaale xaabaale waa lagaga hoydaaye (2 tuulo magacood)
Banka tuuyo waxa laga helaa soofayaal jabane ,,
lol@gabay baa i haya oo waa gabayo ciilkoode
Hadduu Maraykanka joogi lahaa lacag buu ka dhergi lahaa...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ,,,, ninkii gabayo ciilkood baa loo bixiyay ,,
^A deserving nick...
Waryee Jacayl odoga maxaad isku ahaydeen? Intaa waxbaa ka sharqammayya adiga qudhaada ninyahow ...
waar niyow waxba isumaanaan ahayn intaan ogahay hadaan dee awoowgaygii 20 iyo ayeeydiisii 15 ilma abti ahayn ,,,,
Awoowgaagii 20 naad haddii lagaaro labadeenna isku soo dhacayna. Anna ninkaa waxba iima geli.
Laakiin bal sidiisiiyo kale markii gabay ku qabto iskugu kaaya yeer aan ka dhegeysannee...
Adiguna markaad is leedahay yaan lagaa badin u gabay noo yeedh bal ,,